Iindaba -Imfuno yotyalo mali kuMbindi Mpuma nakuMntla Afrika
Imfuno yotyalo mali kuMbindi Mpuma nakuMntla Afrika
Kuyaqondakala ukuba ngo-2021, ibango lotyalo-mali lombane eMbindi Mpuma nakuMntla Afrika liza kuba kufutshane ne-180 yezigidigidi zeedola zaseMelika ukuhlangabezana nemfuno ekhulayo yombane.
Ngokwengxelo, “oorhulumente baqhubekile nokusabela kulo mceli mngeni ngokukhawulezisa iiprojekthi ezintsha nokuphucula iziseko zoncedo ukufezekisa iimfuno, ngelixa likhuthaza icandelo labucala kunye namaziko emali ukuba athathe inxaxheba kutyalo-mali kumzi mveliso wamandla.” Urhwebo lwamandla kuMbindi Mpuma nakuMntla Afrika ngoku lusemva kakhulu kwintengiso yamazwe aphesheya, kodwa kukho amandla amakhulu.
Ingxelo icacisa ukuba oorhulumente bamazwe ahlukeneyo banokubambisana namazwe angabamelwane ukuqhubela phambili baphonononge amandla orhwebo lombane njengesongezelelo kumthamo wabo wemveliso owandisiweyo. Nangona ezinye iigridi zamandla esizwe kuMbindi Mpuma nakuMntla Afrika zinxibelelene, intengiselwano isephantsi, kwaye zihlala zenzeka kuphela ngexesha likaxakeka kunye nokucinywa kombane. Ukusukela ngo-2011, amazwe angamalungu eBhunga leNtsebenziswano kwi-Gulf aqhube urhwebo lwamandla engingqi ngeNkqubo yokuNxibelelana kweBhunga le-Gulf (GCCIA), elinokomeleza ukhuseleko lwamandla kunye nokunyusa izibonelelo zoqoqosho zokusebenza ngokukuko.
Ngokwedatha ye-GCCIA, izibonelelo zoqoqosho zonxibelelwano zamandla ezidityanisiweyo zigqithile kwi-US $ 400 yezigidi kwi-2016, uninzi lwayo luvela kumthamo ogciniweyo ofakiweyo. Kwangelo xesha, ukunxibelelana kwegridi kuya kunceda ekusebenziseni ngokufanelekileyo izibonelelo ezikhoyo zamandla. Ngokwengqikelelo yeBhanki yeHlabathi, inqanaba lokusetyenziswa kwamandla ombane wommandla (umthamo wento) liipesenti ezingama-42 kuphela, ngelixa amandla okudibanisa iigridi malunga ne-10%.
Nangona sinethemba lokuqinisa intsebenziswano kunye nokuphucula urhwebo lwengingqi, imingeni emininzi ithintela inkqubela phambili njengokukhuseleka kwamandla. Eminye imiceli mngeni ibandakanya ukunqongophala kwezakhono ezomeleleyo zeziko kunye nezikhokelo ezicacileyo zemithetho, kunye nokunqongophala komthamo wokusebenza, ngakumbi ngamaxesha obunzima.
Ingxelo iqukumbele ngelithi: “UMbindi Mpuma noMntla Afrika kuzakufuneka ukuba uqhubeke nokutyala imali eninzi kumandla okuphehla umbane nakwiziseko zophuhliso ukuhlangabezana neemfuno ezikhulayo nohlaziyo lwamandla. Ukwahluka kobume bepetroli yingxaki engasonjululwanga kwingingqi. ”